Dulaal Mino Raiola Oo Si Cajiib Ah Uga Hadlay Haraantidii Uu CR7 Ku Dhufan Rabay Alves Kulankii PSG %
Wakiilka caanka ah ee lagu magacaabo Mino Raiola, ayaa wuxuu ka hadlay dhacdooyin muran kooban dhaliyay, kuwaasoo ka dhacay ciyaartii ay kooxda kubada cagta Real Madrid tartanka Champions League ay uga ciribtirtay dhigeeda PSG.
Dhacdooyinkaan ayaa waxay kala yihiin, Casaankii la siiyay qeybta labaad Marco Verratti oo uu wakil uyahay Mino iyo waliba isku daygii uu Cristiano Ronaldo ku Haraanti rabay daafaca dambeedka midi gee PSG, wiilka lagu magacaabo Dani Alaves.
Marco Verratti, ayaa la siiyay Kaar labaad oo Jaalo ah, taasoo keentay in Casaan loogu daro kadib intii ay socotay ciyaartii ay Real Madrid, la dheeshay PSG, laakiin waliikiisa Mino Raiola ayaa wuxuu sheegay in Garsoore Felix Brych, uusan wax fiican sameyn.
Raiola, ayaa sidoo kale sheegay in Verratti, uu udagaalamayey si uu guusha ugu soo dhiciyo kooxdiisa, taasoo shaqo adag looga baahnaa.
“Laga yaabee in [Verratti] uu doonayay in markii uu banaan-baxayay inuu wax walba usameeyo sidii kooxdiisa ay ugu soo bixi lahayd, laakiin waxaa ku dhacday waan aan loo baahneen,” ayuu Mino Raiola, usheegay wariyaasha.
“Waxay ahayd arrin macquul ah oo laga yaabo inay noqoto mid sharaf leh.
“Ka dib dhamaantood, Ronaldo waxa uu si cad ugu banaan-baxay garoonka marar badan, laakiin weli lama siin wax Jaalo ah.
“Xitaa xitaa ma dhicin markii uu isku dayay inuu Haraantiyo Dani Alves,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Mino Raiola, kaasoo ah Wakiilka ciyaaryahano waa weyn oo aan ka xusi karno Paul Pogba, Lukaku iyo waliba Ibrahimovich.
AlvesChampions LeagueCR7Mino RaiolaPSG vs Real MadridRonaldo